Kunyangwe iwe uchida kutanga patsva mushure me chirwere chemarware, kana chenesa komputa yako kudzokorora kana kutengesa, uchiziva maitiro ekugadzirisa fekitori Windows 10 zvichabatsira dzosera kumhanya senge nyowani.
Kugadziriswa kwefekitori ndiyo yekupedzisira tarisiro kana komputa yako ichiita kumusoro, kumhanya zvishoma, kana kuratidza kunetseka mameseji ekukanganisa iyo software haigone kugadzirisa.
Windows 10 ngarava ne yakavakwa-mukugadzirisa sarudzo iyo iwe yaunogona kushandisa kumisikidza PC yako uine kana pasina kubvisa mafaera ako ese.
Muchirongwa ichi, isu tinokufamba nematanho iwe aunoda kuti ugadzirise zvigadzirwa Windows 10
Tichatarisa nzira ina dzakasiyana dzekusetazve Windows 10 kumagadzirirwo efekitori:
Reset uye chengeta mafaera ako
Dzorera uye bvisa zvese
Dzorerazve PC yako kubva kusaina-mukati skrini
Dzorerazve uchishandisa nyowani yekutanga sarudzo
chitsamba: Dzorera mafaira ako usati wagadzirisa Windows 10, zvikasadaro unogona kurasikirwa nemamwe ako akakosha mafaera uye ungatadza dzosa iro rakadzimwa data.
Maitiro ekuti Factory Reset Windows 10 uye Chengeta Mafaira Ako
Kana iwe uchida kuseta patsva Windows 10 uye zvakadaro chengeta mafaera ako ese, unogona kuzviita uchishandisa iyo "Chengeta mafaera angu" sarudzo. Kana maitiro acho apera, iyo PC ichave yakanaka senge nyowani. Ipapo iwe unogona kugadzirisa zvakare magadzirirwo etsika uye kudzoreredza chero maapplication aunoda zvakare.
Kuti utange, sarudza Kutanga> Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo.
Zvadaro, sarudza kupora.
Sarudza iyo kuti Started bhatani pasi pe Sarudzazve iyi PC chikamu.
Zvadaro, sarudza Chengeta mafaira angu.
Sarudza maitiro aunoda kudzoreredza Windows: Cloud kurodha pasi or Yemunharaunda kudzoreredza. Kana ukasarudza Cloud download, inogona kushandisa inosvika 4GB yedata kurodha pasi nekumisikidza Windows 10 pane yako PC. Neye Local reinstall, iwe unozodzoreredza Windows 10 kubva paPC yako.
Sarudza iyo itangezve bhatani.
PC yako inozogadzirisazve kumagetsi mafekitori uye chengetedza ako mafaera Kana iyo reset yapera, tarisa yako PC kune chero Windows Zvidzoreso kuona kuti iyo inoshanda sisitimu irikushaikwa chero zvigamba, zvekuchengetedza, kana akakosha madhiraivha.
Kuti utarise zvekuvandudzwa, sarudza Kutanga> Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo uye osarudza Windows Update > Chengetedza zvinyorwa. Kana zvinyorwa zviripo, Windows 10 chido download uye dzishandise kuti kombiyuta yako.
Unogona kukurumidza kugadzirisa vatyairi vasipo kuburikidza Windows Gadziridza nekuenda ku Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo> Windows Kwidziridzo> Tarisa kuti uwane mhinduro. Sarudza Wona sarudzo dzekudzokorora.
Tevere, sarudza iyo Zvidzoreso zvekutyaira tab, enda kumutyairi waunoda kugadzirisa, uye sarudza Download uye dzishandise.
Pakupedzisira, dzorerazve chero maapp iwe waive waisa pamberi pekugadzirisa zvakare, uye wotanga kushandisa PC yako senguva dzose.
Maitiro ekuti Factory Reset Windows 10 uye Bvisa Zvese
Nesarudzo ye "Bvisa Zvese", iwe unozogadzirisazve PC yako uye kubvisa ako ega ega mafaera, maapplication, madhiraivha, mafaera, uye chero shanduko dzawakaita kumaseteni. Iyo zvakare inobvisa chero maapplication ako PC mugadziri akaisirwa.
Kuti uite izvi, sarudza Kutanga> Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo> Kudzoreredza.
sarudza kuti Started pasi Sarudzazve iyi PC.
Zvadaro, sarudza Bvisa zvese.
Sarudza maitiro aunoda kudzoreredza Windows: Cloud kurodha pasi or Yemunharaunda kudzoreredza.
Kana iwe uchida kudzima ako ega ega mafaera uye data zvakazara, sarudza Chinja Zvirongwa.
Tevere, chinja iyo Yakachena Dhata chinja ku Ehe, uye osarudza simbisa.
chitsamba: Iyi sarudzo inobatsira kana uri kuronga kudzokorora, kupa, kana tengesa komputa yako. Zvinogona kutora rinenge awa kana maviri kuti apedze asi zvinoita kuti zviomere vamwe kudzoreredza chero mafaera awakabvisa. Kusiya iyo Yakachena Dhata toggle kuNo kunoderedza nguva yekupedzisa sezvo ichingo bvisa mafaera chete. Nekudaro, haina kuchengetedzeka.
Maitiro Ekumisazve Windows 10 Kubva kuSign-in Screen
Kana iwe uri kutadza kuvhura Windows kurongwa pane PC yako, unogona kugadzirisa zvakare Windows 10 kubva ku kusaina-mukati skrini.
Kuti uite izvi, shandisa iyo Windows logo kiyi + L keyboard shortcut kuunza iyo yekupinda-mukati skrini.
Tangazve komputa yako nekudzvanya kusuduruka key Paunenge uchisarudza iyo Simba> Tangazve muzasi kurudyi kwescreen yako.
Kamwe kana komputa yako ikatangazve muWinRE (Windows Kudzorera Nharaunda), sarudza disposal mu Sarudza Option Screen.
sarudza Sarudzazve iyi PC.
Sarudza kana uchiita chengeta mafaera ako, bvisa zvese, kana dzosera zvigadzirwa zvefekitori kuenderera mberi.
Kana iwe ukaona iyo Dzosera kumagadzirirwo efekitori pakombuta yako, sarudza iyo. Izvi zvichabvisa ako ega mafaera, akaisa software, uyezve kuisazve Windows 10 uye chero mamwe maapplication akaiswamo akauya nekomputa yako. Windows 10 ichabvisa zvese kubva kudhiraivho uye kuidzosera kune yayo yekutanga mamiriro. Kana iyo Kudzoreredza kumafekitori marongero sarudzo isipo, sarudza Bvisa zvese.
Maitiro ekuti Factory Reset Windows 10 Uchishandisa iyo Nyowani Kutanga Sarudzo
Iine nyowani yekutanga sarudzo, unogona kugadzirisa zvakare Windows 10 uye chengeta mafaera ako kana iwe uchida kutanga nekopi nyowani yeanoshanda system iyo isina bloatware kana kuwedzera software.
Nekudaro, panzvimbo pekushandisa yakasarudzika mufananidzo kubva kune yako PC inogadzira, iyo nyowani yekutanga sarudzo inoshandisa iyo yekutanga mufananidzo we Windows 10 yakapihwa neMicrosoft.
chitsamba: Izvi zvinogona kusashandira makomputa ane zita rakadai saDell, HP, ASUS kana Acer sezvo isingakwanise kudzoreredza mamwe maapplication kana madhiraivha aungade. Uyezve, iwe unogona kusakwanisa kushandisa iyo yemhando yekugadzira mufananidzo mumaseti anotevera.
To reset Windows 10 uchishandisa iyo nyowani yekutanga sarudzo, vhura Windows chibatiso uye sarudza Kuita kwechigadzirwa & hutano.
sarudza Kuwedzera ruzivo pasi Kutanga patsva, uye osarudza Tanga> Inotevera muhwindo idzva kumisikidza maitiro. Kana iko kutanga kutsva kwaitwa, dzorerazve maapplication aunoda kushandisa.
Ukangopedza iwo matanho, ekutanga Windows 10 mufananidzo uchashandiswa kugadzirisazve yako Windows 10 PC, kuchengeta yako pachako data.
Zviputse zvese uye Tanga Pamusoro
Isu tinovimba mutungamiriri uyu akabatsira iwe fekitori kugadzirisa Windows 10 uye komputa yako yadzokera kune yayo yekutanga mamiriro. Kana iwe uri kushandisa Mac, uye ikangoerekana yatanga kuita zvisina kujairika, unogona dzosera iyo PRAM uye SMC. Tarisa uone edu mamwe magwara ekuti ungaite sei pukuta uye dzosera Windows 10 kana kushandisa izvi nzira iri nyore yekuchenesa kuisa Windows 10 pasina kunetseka nezve hunyanzvi ruzivo.
Wakagona here kumisazve komputa yako kuzvigadziriso zvefekitori? Goverana nesu mumashoko.
Nzira yekugadzirisa sei Windows 10 Kushandisa Ratidzazve iyi PC